राम्री देखिनुपर्ने दबाब - मनोरञ्जन - नेपाल
मनोरञ्जनको दुनियाँमा फेसन अपरिहार्य छ । देखाउने दुनियाँ भएकाले होला, जसले सुन्दर रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ, उसैले वाहवाही पाउँछ । सुन्दरताको व्यापार कहिल्यै फेल खाँदैन । राम्रो देखिन को चाहँदैन ? यस्तै, फेसनलाई चुनौती दिएकी थिइन्, अमेरिकी पपगायिका लेडी गागाले । ग्रामीजस्ता ठूल्ठूला अवार्ड समारोह र मेट गालाजस्तो र्‍याम्पवाकमा उनले चुनौती दिँदै फरक पहिरन लगाइन् । पहिरनले महिलालाई अत्यन्तै सुन्दरी देखाउनुपर्ने पूर्ववत् सर्त लत्याएर गागाले मासुको पहिरन लगाइन् । सन् २०१० को एमटीभी भीएमए समारोहमा उनले उक्त पहिरन समलिंगीको अधिकारका लागि सरकारको नीतिको आलोचना गर्न लगाएको बताइन् ।
महिला भन्नेबित्तिकै सुन्दर देखिनुपर्छ भन्नेका लागि लेडी गागाको यो ठूलो झापड थियो । उनले पहिरनमा गर्ने भिन्नभिन्न प्रयोगले फेसनलाई 'युनिक' रूपमा स्वीकार्न सञ्चार माध्यम बाध्य बन्यो । तर अझै पनि अमेरिकी मनोरञ्जन उद्योगमा उत्कृष्ट र खराब पहिरनको भोटिङ हुन्छ । मतका आधारमा नराम्रो पहिरनमा परेका कलाकार तथा मोडललाई मिडियाले उछितो काड्छ भने सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल पनि उत्तिकै । गायिका गागाले दिएजस्तो झापड अन्य देशका मनोरञ्जनमा काम गर्नेहरूले लगाउन सकेका छन् त ?
मनोरञ्जनको दुनियाँमा अधिकांश युवकयुवतीको आसक्ति नै काफी छ, यो बताउन । चाहे स-साना सहरबाट काठमाडौँमा आउने भीड या भनौँ धनाढ्य खान्दानी परिवारबाट आउने युवा । विराटनगरबाट नायिका बन्ने सपना बुनेर आएकी रेखा थापा होऊन् या राजा सुरेन्द्रकी सन्तति साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाह, मनोरञ्जनले सबैलाई लोभ्याएको छ । नाम र दामको लोभमा युवा जमात मनोरञ्जन उद्योगमा आकषिर्त देखिन्छ । यो उद्योगमा प्रख्यात भएपछि मात्र दाम र नाम कमाइन्छ भनिए पनि सुरुआती दिन त्यति सहज छैन । पछिल्लो समयका सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम र युट्युबजस्ता अनलाइन साइटले मनोरञ्जनको दुनियाँमा काम गर्ने कलाकार र मोडललाई चर्चा कमाउन सहयोग त गरेको छ । तर तनाव पनि उत्तिकै दिइरहेको छ । हरेकपल्ट नयाँ पहिरन, नयाँ जुत्ता तथा गरगहनामा देखिरहनु सम्भव छैन । सामाजिक सञ्जालले चुनौती झन् थपेको छ । फेरि संसारमै विडम्बना छ, महिलाको पारिश्रमिक जुनै क्षेत्रमा पनि पुरुषको तुलनामा थोरै छ । राम्रो देखिने दबाब पनि महिलालाई नै छ ।
तस्बिर सौजन्य : ऋचा शर्मा
नेपालको मनोरञ्जन क्षेत्र त्यस्तो फराकिलो पनि छैन, जसरी भारतमा फैलिएको छ । त्यहाँ टीभीमै काम गर्ने कलाकारले हिट भएपछि प्रतिसिरिज भारतीय रुपैयाँ डेढ लाखसम्म पाउँछन् । तर नेपाली उद्योग त्यस्तो छैन । थोरै आम्दानीमा सधैँ टिपटप भएर हिँड्न नसकिने बताउँछिन्, अभिनेत्री ऋचा शर्मा, ३२ । ०६६ सालमा फस्ट लभबाट चलचित्र उद्योगमा आएकी ऋचाका अनुसार आम्दानी हेरी खर्च गर्नुपर्छ । भन्छिन्, "हामीसँग त्यस्तो धेरै पैसा छैन, सधैँ फेरी-फेरी नयाँ लगाएर हिँड्न सकियोस् । ठाउँअनुसार विशेष पहिरन लगाउनुपर्छ । तर हरेक दिन नयाँ सम्भव छैन ।"
ऋचाका अनुसार फेसन ट्रेन्डमा रमाउने कलाकार टन्नै छन् । साम्राज्ञी, स्वस्तिमा खड्का र पि्रयंका कार्की ऋचालाई फेसेनेवल लाग्छन् । तर फेसनलाई आफू भने प्राथमिकतामा राख्दिनन् । सामाजिक सञ्जालको जमाना र 'शो बिजनेस' मा काम गर्ने भएकाले प्रस्तुतिमा ध्यान दिन जरुरी भएको ऋचा बताउँछिन् । भन्छिन्, "म ठीक, उचित र राम्रो देखिनुपर्छ । त्यसमा मात्र हो, मैले ध्यान दिने ।"
आफूले मिडियामा काम गर्दा संक्रमणकालीन समय भएकाले उति समस्या नपरेको ऋचाले सुनाइन् । परम्परागत पहिरनका लागि ६/७ वटा बुटिकले उनलाई सहयोग गरेका छन् । सपिङका लागि अझै न्युरोड नै जान्छिन् । भएकै कपडा मिलाएर लगाउन जान्नु कला भएको उनी मान्छिन् । उनीसँग जिन्सको भेराइटी छ । पहिरन दोहोर्‍याएर पनि लगाउँछिन् । भन्छिन्, "कुनै कपडा यति आरामदायी हुन्छन्, त्यही मात्र लगाउन मन पर्छ ।"
अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का, २४, लाई चलचित्रजस्तै पहिरन र प्रस्तुतिमा प्रयोग गरिरहन मन पर्छ । तर अरूलाई देखाउनकै लागि फेसन गर्न मन लाग्दैन । भन्छिन्, "मैले कहिल्यै दबाब महसुस गरिनँ । सबैलाई देखाउन जरुरी छैन् । आफूलाई मन परेको, सुहाउने पहिरन लगाउने हो ।"
सार्क फिल्म फेस्टिभलमा बुलबुलका लागि विशेष जुरी अवार्ड पाएकी स्वस्तिमाका अनुसार चलचित्र क्षेत्रमा अधिकांश कलाकारका आफ्नै डिजाइनर छन् । विशेष कार्यक्रमका लागि अन्य डिजाइनरका कपडा लगाइन्छ । भन्छिन्, "उनीहरूको कामको पनि प्रमोसन हुने अनि हाम्रो आवश्यकता पनि टर्ने । त्यसैले अन्य डिजाइनरको कपडा लगाउँछौँ ।" नेपाली डिजाइनर पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हुँदै गएको स्वस्तिमाको बुझाइ छ । भन्छिन्, "सार्कमा र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र हेर्दा नेपाली डिजाइनर कम छैनन् ।"
गुगलमा फेसन ह्याक भनेर टाइप गर्‍यो भने दर्जनौँ भिडियो र समाचारका साइट भेटिन्छन् । यी भिडियो र साइटले एउटै कपडा, जुत्ता र गरगहनालाई कसरी फरक-फरक तरिकाले लगाएर प्रत्येक पटक नयाँ देखाउने भनेर सिकाउँछन् । फेसन ह्याक महिला फेसनपारखीमाझ प्रख्यात छ । फेसन ह्याकजस्तै अभिलाषा शर्मा एउटै कपडालाई कहिले टिसर्ट त कहिले वनपिसका रूपमा लगाएको बताउँछिन् । भन्छिन्, "पहिरन लगाउन जान्नुपर्छ । एउटै कपडालाई पनि फरक-फरक शैलीले लगाउन सकिन्छ ।"
र्‍यापर निर्णय एनएसकेको गीतबाट म्युजिक भिडियोमा डेब्यु गरेकी अभिलाषा हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङबाट ब्याचलर्स अफ इन्जिनियरिङ गर्दै छिन् । पढाइका कारण पनि इभेन्टमा जान समय हुँदैन । फुर्सद निकालेर म्युजिक भिडियो र र्‍याम्पवाक गर्ने भएकाले सपिङ जान समय कम हुने उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, "कुनै इभेन्टमा जानैपरे र भनेकै कपडा नभए बुटिकको सहयोग लिने गरेकी छु ।" उनी सपिङ आफ्नै पैसाले गर्छिन् । अस्ट्रेलियाबाट बाआमाले पहिरन, जुत्ता र गरगहना पठाइदिने कारणले पनि उनलाई केही सहज हुने गरेको छ ।
बेलायत, थाइल्यान्ड घुम्न जाँदा एकैपल्ट थुप्रै पहिरन किनेर ल्याउँछिन्, मोडल सृष्टि खड्का, २२ । उनलाई भने बुटिकको ड्रेस लगाउन खासै मन पर्दैन । भन्छिन्, "मलाई एलर्जी हुन्छ, त्यही भएर पनि लगाउँदिनँ ।"
प्रायः आफ्नै पहिरन लगाउने सृष्टिका मोडलिङ क्षेत्रमा थोरै मात्र साथी छन् । इन्स्टाग्राममा देखाउनकै लागि नयाँ-नयाँ फोटा राख्ने, सस्तो सामान किने पनि ब्रान्डको हो भनेर गफ दिने व्यक्ति उनलाई मन पर्दैनन् । भन्छिन्, "शोअफ गर्ने धेरै छन्, त्यही भएर साथी बन्न सक्दिनँ ।"
हरेक दिन बाहिर निस्कन सृष्टि प्रायः जिन्सका आउटफिट लगाउँछिन् । एउटै पहिरन दोहोर्‍याएर लगाउन रुचाउँदिनन् । ३ वर्षदेखि उनी मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्दै छिन् । मोडलिङ, विज्ञापन तथा म्युजिक भिडियोमा काम गरिरहेकी सृष्टि परिवारबाट खर्च नलिएको बताउँछिन् । भन्छिन्, "म आफ्ना लागि आफैँ खर्च जुटाउँछु । मितव्ययी हिसाबले खर्च गर्छु ।"
अभिनेत्री झरना थापाले जाडो महिनामा वनपिस लगाउँदा सञ्चार माध्यम तातेको थियो । पि्रयंका कार्कीले वनपिस लगाउँदा उस्तै प्रतिक्रिया आयो । पत्रकारले सोध्दा उनले जवाफ दिएकी थिइन्, "हिरोइनलाई कहाँ चिसो लाग्छ ? उनीहरू त ग्लामरस देखिनुपर्‍यो नि ।" मिडिया या फ्यानले कलाकार तथा मोडललाई राम्रो बन्न दबाब दिएका यी केही उदाहरण हुन् । तर मिडियाले यस्तो कुनै दबाब नदिएको कलाकारद्वय ऋचा र स्वस्तिमाको तर्क छ । त्यस्तो खाले कुनै दबाब नझेलेको उनीहरूको अनुभव छ । यी कलाकारले भनेझैँ मिडियामा राम्रो देखिने दबाब छैन भने किन हाम्रा कलाकार तथा मोडल राम्रो देखिने होडबाजीमा छन् ? किन उनीहरू आफ्नो क्षमता तिखार्नभन्दा पनि इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा फोटो राख्न व्यस्त छन् ? गायिका गागाले जस्तो कुनै विशेष 'कज' का लागि पहिरन लगाएका छन् ?
ट्याग: पहिरन रिपोर्ट